Unonophelo lwezeMpilo olungenamda kunye noMpheki uBobby Chinn Ukukhupha iLifu elitsha lezeMpilo leGourmet
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Unonophelo lwezeMpilo olungenamda kunye noMpheki uBobby Chinn Ukukhupha iLifu elitsha lezeMpilo leGourmet
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • inkcubeko • ukonwatyiswa • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • News Sustainability • Technology • Tourism • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Umda ongenamda weQela lezeMpilo, uvulindlela wehlabathi kwitekhnoloji yokhathalelo lwempilo, imithombo yeendaba, unxibelelwano ngomnxeba, umxholo, kunye neenkonzo, uphuhlise i-Delicious.Impilo, ilifu lokuqala lokunxibelelana elisempilweni. Kunye neqabane, umpheki wodumo wamazwe aphesheya uBobby Chinn, inkonzo entsha izakukhupha iqonga lesitudiyo esisekwe kwilifu labapheki naphi na emhlabeni ukwenza iinkqubo zabo zokupheka.
Le modeli intsha yokupheka kulindeleke ukuba igqithe imodeli yomgama yangoku kwiiklasi zokupheka ezikwi-Intanethi.
Abathengi ngoku banomdla wokufunda ukupheka isidlo esimnandi esisempilweni.
Ukudibana okukhulayo kokutya, impilo kunye netekhnoloji ebonisa ithuba elikhulu elingazalisekiswanga kushishino lokubuka iindwendwe.
"Ukuvumela abapheki ukuba baveze iiresiphi zabo ezisempilweni kunye neengcali zempilo kunye nezigidi zabenzi bamakhaya yinto entle, zombini kulwazi kunye nakwifomathi yokubonisa," ucacisa uGqirha Wei Siang Yu, usihlalo nomseki weQela lezeMpilo elingenamda. “Le modeli intsha yokupheka kulindeleke ukuba igqithe imodeli yangoku yeeklasi zokupheka kwi-Intanethi. Siqinisekile ukuba abathengi ngoku banomdla wokufunda ukupheka ukutya okumnandi okusempilweni. ”
"Ndichulumancile ukuba yinxalenye yeDelicious. Impilo yokuguqula ukutya okuphekwe ngokutya kunye nokwazi isayensi yezempilo njengohlobo olutsha lwe" meditainment "olwenziwe nguvulindlela yiBorderless Healthcare Group," utshilo uChef Bobby Chinn.
Ngokophando lwentengiso, impilo kunye nentlalontle yokutya kwintengiso yokutya kunye nekhitshi lamafu kunye nentengiso yokuhanjiswa kokutya kulindeleke ukuba ifikelele kwixabiso eliqikelelweyo nge-US $ 394.75 yezigidigidi ngo-2028. ukuhlangana okukhulayo kokutya, impilo kunye netekhnoloji ebonisa ithuba elikhulu elingazalisekiswanga kushishino lokubuka iindwendwe.
Impilo ivumela abapheki kunye namashishini enkonzo yokutya ukuba banxibelelane kwaye basebenzisane nezempilo, impilo kunye neengcali zesayensi yokutya ngenkxaso yeelwimi ezininzi zokutya ukuze benze iindlela zokupheka ezichanekileyo zabathengi abazi impilo. Iqonga libonelela ngezisombululo ezihlanganisiweyo ze-e-commerce zeemveliso zokutya ukuze zisebenzisane nabapheki kunye nokwenza amava okutya okuphekiweyo apho abathengi banokuthi bathenge iimveliso ezibonakalayo kwiDelicious.Health. Ikwayilelwe nokuba ivumele abathengi ukuba bapheke baphile kunye nabapheki abadumileyo kunye nokuxhasa iimveliso zokutya ezisempilweni ukuze kuthengiswe amandla okuthengisa omnichannel. Ezempilo zijolise ekuguquleni umxholo, iinkonzo, iimveliso, ubukrelekrele bokuzenzela kunye ne-Intanethi yezinto (IoT) kwilifu elinye apho abapheki banokunxibelelana ngqo nabathengi.
Kwiinyanga ezintathu ezizayo, i-Delicious.Impilo iya kukhupha inkonzo yabapheki ukuba basasaze iindlela zabo zokupheka ezisempilweni. Abapheki abathatha inxaxheba baya kuhambisa iplagi entsha kraca kunye nokudlala itekhnoloji yokwenza ezabo iinkqubo zokupheka okanye imisitho yokusasaza kwi-Intanethi. Abathengi banokubhalisa kwi-Delicious.Impilo yokujoyina imicimbi eyahlukeneyo kwi-Intanethi. Ukuqaliswa kweDelicious.Impilo linyathelo lokuqala lokuba eli lifu litsha linokuyixhasa njani iminqweno yabapheki yokuba yi-omnichannel yokutya.
Impilo iya kuba yimiboniso bhanyabhanya yokupheka kunye nabapheki abathile abadumileyo kubandakanya uthotho kunye nompheki odumileyo uBobby Chinn ukunceda abantu abatsha ukuba baziqalele abaqhubi beenqwelo moya zabo zeTV. U-Bobby Chinn uzenzele njenge-rockstar yokupheka e-Asia nase-Middle East, ukusukela kumdlalo ophumeleleyo we-"World Café Asia" uthotho lwe-TV kwi-Discovery TLC kwaye waba ngumdlalo osisigxina kwi-MBC's "Top Chef Middle East", enye yezona zinto Imiboniso eyaziwayo yokupheka kuMbindi Mpuma nakuMntla Afrika.
Ezempilo ziya kuthi emva koko zisungule iqonga layo lokupheka apho abathengi banokubhalisela ukuhlala kwimicimbi yokupheka kunye nabapheki abadumileyo kunye nabanye abantu abaziwayo kwezempilo kunye nokuba sempilweni.
Uhlaziyo oluthe kratya kwiminyhadala yokupheka ngokubambisana yabathengi iya kufumaneka nge kumnandi.impilo.
Malunga neQela lezeMpilo elingenamda
Yasekwa ngonyaka ka-2008, iBorderless Healthcare Group (BHG) nguvulindlela wehlabathi kuqoqosho lokhathalelo lwempilo lwabathengi apho itekhnoloji, inkonzo, umxholo, imithombo yeendaba, imveliso kunye nedatha yesayensi yenziwe ukuba isebenzisane kuyo yonke inkqubo ye-eco-nkqubo yamaqela oshishino aqala kukhathalelo lwempilo, ukungakhathali. , impilo, ukondla okuchanekileyo, itekhnoloji, imidiya, i-bio-banking, iinkonzo zefu, ubukrelekrele bokuzenzela, ukubuk 'iindwendwe kunye notyalo-mali. Uninzi lwamanyathelo e-BHG lelokuqala kwaye uninzi lujolise ekuphazamiseni okanye ekuguqulweni konikezelo lweenkonzo ezikhoyo kunye nonikezelo lonyango. Ngolwazi oluthe kratya, tyelela apha.
Malunga noMphathi uBobby Chinn
UBobby Chinn waziwa kwangoko njengomntu osasazo, umpheki wodumo kunye nomsingathi wefranchise ephumelele kakhulu ye "World Café". Ngoku ulungelelwaniso olusisigxina kwi "Top Chef Middle East" kwaye ubamba "Gcina ilula" eyasungulwa ngo-2020. Kuhambo lwakhe lokuya kumpheki, umbhali kunye nomcebisi ovunyiweyo kwilizwe liphela, uBobby uzimise njengoyena ndoqo wejelo lokutya lehlabathi uthungelwano kwaye waziwa njengengcali yecuisine yaseAsia naseMbindi Mpuma. UBobby ngummeli we ezizinzileyo, ukutya okusekwe kwizityalo kwaye uyonwabele ukutya izitya ezintsha ukubonisa ezi zinto. Uhlala ebonakala njengoMpheki weNdwendwe kwimiboniso yokupheka oyithandayo kwaye usebenze nabantu abanjengoKeith Floyd, Martha Stewart, Anthony Bourdain, Antony Worrall Thompson noAndrew Zimmern. UBobby ukwasebenza njengommeli wangaphambili wase-Vietnamese wezokhenketho kwi-EU. Okungakumbi malunga noBobby Chinn.